Baarlamaanka cusub shaki baa ku jira sharci ahaanshihiisa
Toddobaadyadii la soo dhaafay buuq badan ayaa jiray oo ku saabsan sharci ahaanshaha Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ee lagu dhidbay Nairobi. Dadka qaar baa ku dooday inuu sharci yahay (legitimate), kuwa kalena waxay yiraahdeen wax qiil ah looma raadin karo oo waa sharci-darro dhismihiisu.
Marka aan miisaameyno baarlamaanka cusub inuu sharci yahay iyo in kale, sharcigee ayaan ku miisaannaa? Ma waxaan raacaynaa sharciga caalamiga (International Law)? Mise Kenyan Law? Mise Ethiopian Law? Mise IGAD Law? Mise shareecada Islaamka?
International Law, ma soo dhex geli karo sharciyada hoose (local law) ee ay dowladuhu leeyihiin. Sidaas darteed, waddan waddan kale local law-giisa dhex geli kara ma jiro. Shareecada Islaamka warkeedaba daa, waayo ma oggolaanayso Gole xeer-beegti oo ay soo dhiraandhiriyeen qabqablayaal dhiig-yacab ah iyo baaderi diinta Christian-ka.
Constitution-ka lagu sameeyey Mbagathi wax awood ah uma siinayo qabqablayaasha inay Baarlamaanka iyaga soo dhisaan. Maadaama ay yihiin rag xaaraan ku caan baxay marna ma keeni karaan tiirarkii lagu aasi lahaa guri xalaaleed oo ay Soomaalidu ku soo wada hirato iyo dowlad sharciyan macquul ah (credible legal government).
Si kasta oo ay noqoto dowladda dhalan doonta ma noqonayso mid shaqeysa. Sababtoo ah qabqablayaasha daacad kama ahan hirgelinteeda, mana ka tanaasulayaan awooddooda sharci-darrada ah.
IGAD, sidoo kale, daacad kama ahan in laga gaaro Soomaaliya nabad kama dambays ah (true and lasting peace), waayo waxay wataan dano gaar ah oo ku saleysan faa'iido degdeg ah (short gain). Waxaa yaab leh dalabka IGAD ee la xiriira inay lix bilood dowladda cusub korka kala socdaan oo la eegaan dhaqaalaha la siinayo.
Waxaan la wada soconnaa saddex sano oo Afghanistan ay ka jirtay dowlad uu Mareykanku waardiye ka yahay in lagu bixiyey balaayiin doollar, laakiin weli inuu dalkii ku jiro nabadgelyo-darro iyo dhaqaale-xumo ka badan intuu ku jiray waagii Talibaaniyiintu haysteen.
Waxaa kaloo jirta in qabqablayaasha dagaalka Afghanistan ay awooddii dib u hantiyeen oo ay yihiin hadda kuwa haysta xukunka. Yaa ku aflaxay lacagihii deeqda ahaa ee lagu bixiyey Afghanistan?
Warqad furan oo ku socota gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee Soomaalia (Guniin)
U hiili gabdha yar yar ee Soomaalida (Foodlayda)
Gudoomiye Shariif Hassan Sheik Aden
Anigoo ku hadlaya gabdhaha yar yar ee Soomaaliyeed ee loo gaysto dhibta aadka u badan waa gudniinka fircooniga ee qilaafsan diinta islaamka waxaan kaa codsanayaa inaad baarlamaanka hordhigto in la mamnuuco
Waa arrin waqti dheer laga seexday oo dawladihii hore ku fashilmeen
waxaan kaa codsanaynaa in uu noqdo waxqabadka koowaad ee baarlamaanka aad adiga af hayeenka u tahay.
dadkii waa bislaadeen waala soo gaaray waqtigii la mamnuuci lahaa waayo dadka badankood waa ogaadeen in aanay diinta shaqo ku lahayn.
U doodaha foodlayda Soomaaliyeed.
Dad yar iyo hay'adaha aan dowliga ahayn ee ka socda dalalka deeqda bixiya ayaa afka ku shubtay kharashkii waddankaas loogu deeqay. Iyadoo waxaas oo lacag ah lagu bixiyey ayaa waxaa la soo weriyey usbuucii dhowaa in Daalibaan ay dib u soo rogaal-celisay oo ay gobollo badan soo kulaaleen.
Soomaaliya waxaa lagu qaylinayey afar sano in lacagihii dalalka Carabtu bixiyeen inay jeebka ku shubteen saraakiisha dowladda KMG ah ee lagu soo dhisay Djibouti.
Lacagta hadda loogu deeqi doono Soomaaliya ma soo dhaafi doontaa Nairobi oo wax ma ka beddeli doontaa sarrifleyaasha dollarka Muqdisho ee aaminsan in dollar badan uu soo geli doono dalka haddii dowlad dhalato oo markaas kaddib shillinku hoos u soo dhici doono?
"Soomaaliya dowlad waa yeelan kartaa, laakiin masiibada lugaha kalama bixi doonaan illaa iyo inta qabqableyaashu u horkacayaan dariiqa ay ku doonayaan inay ku gaaraan haykal maamul," sidaa waxaa yiri diblomaasi fadhigiisu yahay Brussels.
Sidaas awgeed, qabqablayaashii ku caan baxay falalka waxashnimada inay u dallacaan xubno baarlamaan (parliamentarians) waa wax aan la aqbali karin oo rajo xumo ku abuuraysa dadweynaha caadiga ah.